I-YiWu Market - Yunis International Ukuhweba Co, Ltd.
Imakethe yezimbali yokufakelwa ye-Yiwu itholakala ku-yiwu International Trade City District District 1 floor yokuqala. Imakethe ivulwa kusuka 9:00 am to 6:00 pm. isivele inezitolo ezingaphezu kwe-1000 ezithengisa izinhlobo ezahlukahlukene zezimbali zokufakelwa nezimbali zokufakelwa ......
Izikhwama ze-Yiwu nezimakethe zezimakethe zisemakethe yoku-1 ye-Yiwu International Trade City District 2, evula ngo-9 amto 5:30 pm Kukhona amakhulu amafektri nezinkulungwane zezitolo ezitolo zakwa-Yiwu nezikhwama zamakethe.
Imakethe yamabhande e-Yiwu itholakala kwi-yiwu yezangaphakathi yedolobha yedolobha 3, ivulwa kusuka ku-9 am kuye ku-5:30 pm Le makethe ihamba ngaphezulu kwabathengisi abangaphezu kwe-10000, kufaka phakathi izitayela ezahlukene nezinto ezahlukahlukene ezifana nebhande lendoda, ibhande lesifazane, ibhande lesikhumba langempela , i-blet yekotini nelineni, ibhande le-PU, ibhande le-PVC njalonjalo ......
Imakethe ye-Yiwu Futian, ebizwa nangokuthi yi-Yiwu emakethe yokuhweba yamazwe omhlaba, itholakala maphakathi nesifundazwe saseZhejiang. Eduze naseningizimu yayo kuneGuangdong, iFujian ne-Yangtze river hinterland entshonalanga. Empumalanga yayo kungumuzi omkhulu kunayo yonke - iShanghai, ebheke esiteshini segolide sePacific. I-Yiwu manje yisikhungo esikhulu kunazo zonke sokuhambisa impahla emhlabeni. Inqunywe njengemakethe enkulu kunazo zonke emhlabeni yi-UN, ibhange lomhlaba nezinye iziphathimandla zomhlaba ......
Imakethe yamathoyizi e-Yiwu iqale kusukela ngeminyaka yo-1980. Ekuqaleni, izinkundla zebhizinisi eziphambili beziyindawo yokuhweba yedolobha yamazwe onke 1.Inezitolo ezingama-2250, Indawo yebhizinisi elingamamitha-skwele angama-20000. Kusezingeni elikhulu futhi kuseluliwe. Kunezinkulungwane zamathoyizi emakethe. Kwimpahla ethunyelwa ngaphandle evela kwa-Yiwu, amathoyizi athatha ama-60%. Imikhiqizo yamaShayina kanye neyamanye amazwe asungula ama-franchisees emakethe yamathoyizi e-Yiwu. Inani elikhulu lamathoyizi athunyelwa eChina nakwamanye amazwe angaphezu kuka-200 nezindawo phesheya ......
Imakethe yesikhungo sempahla yamathuluzi i-Yiwu itholakala e-yiwu International Trade City District 3, floor yesibili, iMakethe ivulwa kusukela ngo-9: 00 kuye ku-5: 30 pm.Imakethe inezitolo ezingaphezu kwezingu-3000 zezinto zokubhala. Imikhiqizo kufaka phakathi: ipeni, iphepha, isikhwama sesikole, i-eraser, i-sharpens yepensela, incwadi yokubhala, iziqeshana, ikhava yencwadi, uketshezi lokulungisa ......
I-YIWU Ibonisa ISIKHATHI SOKUVULA ISIKHATHI
Imakethe yezicucu ze-Yiwu manje yathuthelwa esifundeni se-NO.4 sedolobha lokuhweba lakwamanye amazwe le-yiwu. Uma usesiteshini sesitimela se-yiwu, unga-801 no-802 ukuza kule makethe
Isikhathi Sokuvulwa Kwemakethe Ye-Yiwu ngo-9: 00 kuya ku-18: 00.Ngempela ungathenga noma u-oda noma yisiphi isitayela nezinhlobonhlobo ozifunayo.
yiwu isikhafu namawashi emakethe atholakala e-Yiwu international trade wedolobha lesifunda 4, Isikhafu semakethe yemfucumfucu kanye namashawa Isikhathi sika-09:00 - 18:00 ......
Omunye wemikhiqizo ephambili emakethe ye yiwu ubucwebe. Imakethe yokuhlobisa ubucwebe be-Yiwu isesitezi sesibili sesifunda semakethe yamazwe omhlaba 1. Ungathola konke okufakiwe njengezingubo zekhanda, amacici, imigexo, namasongo, izindandatho, ubucwebe, imihlobiso yasesinqeni nokunye ......
Imakethe ye-Yiwu huangyuan itholakala endaweni echumayo yamabhizinisi e-xiuhu, ihlanganisa indawo eyi-117mu, okubandakanya amamitha angama-42 endawo yokwakha, ngokutshalwa kwezigidigidi eziyi-14, isetshenziswa kusukela ngo-Ephreli, 2011. I-Yiwu huangyuan izimakethe zebhizinisi isikhathi kusuka ngo-7: 30 kuye ku-20: 30 ebusuku ......